Su’aalaha La Iska Weydiinayo In Madaxweyne Biixi Uu Wareejin Karo Guddoomiyenimada Kulmiye & Mustaqbalka Maxamuud Xaashi – Horn Cable Tv
0	March 14, 2020 8:12 am
Hargeysa (HCTV) – Shirweynaha xisbiga KULMIYE ayaa la mudeeyay inuu qabsoomi doono bisha June ee sannadkan.
Su’aalaha ugu badan ee siyaasiyan la iska weydiinayo shirweynaha xisbiga ee bisha June iyo natiijadiisa ayaa waxa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga oo uu Madaxweyne Biixi hadda hayo, waana su’aasha ugu adag ee aan weli jawaab rasmi ah loo haynin in Madaxweyne Biixi wareejin doono guddoomiyaha xisbiga iyo inuu sii haysan doono guddoomiyenimada xisbiga.
Hase yeeshee dad badan ayaa qaba inaanu madaxweyne Biixi wareejin doonin guddoomiyenimada xisbiga KULMIYE, waxaanay dadka aragtidan qabaa aaminsan yihiin in Madaxweyne Biixi ka cabsi qabo inuu xisbigu galo tafaraaruq siyaasadeed haddii uu wareejiyo guddoomiyenimada xisbiga.
Dad kale ayaa iyaguna aaminsan in haddii aanu Madaxweyne Biixi wareejin guddoomiyenimada xisbiga, ay xisbiga; ay KULMIYE soo waajahi karto culays siyaasadeed oo kaga yimaadda beelaha ugu awoodda badan xisbiga.
Haddii uu Madaxweyne Biixi go’aansado inuu sii haysto guddoomiyenimada xisbiga KULMIYE, waxa iyana la isweydiinayaa inuu ogolaan karo in lagula tartamo gudaha shirweynaha xisbiga, waxaase adag sida ay arrintani u dhacdo.
Sidoo kale Madaxweyne Biixi haddii uu guddoomiyenimada xibsiga wareejiyo ma ogolaan doonaa in tartan xalaal ahi ka dhaco gudaha xisbiga, mise wuxuu calaamadin doonaa mid ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga KULMIYE ku bahoobay.
Su’aalaha kale ee shirweynaha xisbiga KULMIYE ee bisha June la iska weydiinayo waxa iyana ka mid ah mustaqbalka siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga oo kal hore shaaciyay inuu u tartamayo guddoomiyenimada xisbiga.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan ifafaalaha ilaa hadda muuqdaa ay muujinayaan inaanay jirin wax fursad ah oo Maxamuud Xaashi uga banaan xisbiga KULMIYE wakhti xaadirkan, waxaase suurtogal ah in waayaha siyaasadeed si fudud isu bedelaan.
Maraykanka Oo Xaalad Deg-deg Ah Lagu Soo Rogay